समाचार Archives - KavrePress
दृष्टिबिहीनहरूले भोग्ने गरेका दुखसुखको कहानीलाई गीतमा उतारिएको ‘हाम्रो पनि मन हुन्छ…’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो डिलाईटेड नेपाल युटुब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । यसैबर्ष रचना तर्फको नातीकाजी स्मृती पुरुस्कारबाट पुरस्कृत गीतकार डी. पी. दाहाल परिश्रमीद्वारा रचित गीतमा दृष्टिबिहीनहरूको मन भित्रका भोगाईहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा आँखा देख्नेहरूले आँखा नदेखि बिबश भएकाह...
काठमाडौँ । गायिका सुरक्षा सेन्चुरीको स्वरमा रहेको ’तिमी बिना’ गीतको भिडियो बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।हङ्गकङ्ग निवासी गीतकार रचना प्रधानको शब्द सिर्जना तथा बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको संगीतमा गीत तयार गरिएको छ । गीतमा राहुल प्रधानको एरेन्ज रहेको छ । तिमी बिना भाग ३ मा प्रबिन डिसी , आयुष्मा कार्की र सृष्टि सुब्बाको अभिनय रहेको छ । दिनेश पराजुलीको छायाँकन , अमृत चापागाईँको सम्पादन...
रामकृष्ण र काब्यको स्वरमा ‘आए कमला…’ (भिडियोसहित)
रामकृष्ण निरौला र काब्य आचार्यकको स्वरमा रहेको गीत ‘ओए कमला’ सार्वजनिक भएको छ । विक्रम केसीको शब्द, सुनिल रोक्काको संगीत रहेको ‘डान्सिङ’ शैलीको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । प्रहिल कार्कीले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा पुष्प खड्का र बिना राउतको अभिनय छ । रमणीयस्थल शुभतारा स्कुल लामाटारमा छायाँकन गरिएको भिडिओमा सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी, उत्तम हुमागाईँको सिनेमाटोग्राफी र मा...